Sandals Foundation Inodyara muCommunity Youth Center
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Sandals Foundation Inodyara muCommunity Youth Center
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Kutarisirwa • Mutsvene Lucia Breaking News • Sports • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Basketball uye matare-akawanda anotamba matare kuBuckfield Playfield, iri mumoyo weOcho Rios muJamaica, vagamuchira kumeso kukuru uye kugadzirisa kuti vagone kushandira vagari mhiri kweparishi yeSt. Ichitevera ingangoita US $ 50,000 yekudyara kubva ku Sandals Foundation, nzvimbo iri nani kupfuura nakare kose.
Iyo nzvimbo yanga iri nzvimbo yakachengeteka yevechidiki kushandisa nguva yavo uye nzvimbo huru yekutambira mitambo yehushamwari, makwikwi emitambo, uye zviitiko zvevaraidzo. Nzvimbo yakakwidziridzwa ikozvino ine bhora rebasketball rakavandudzwa pamwe nemidziyo yenetball, ichangovakwa nzvimbo dzevaoni, yakaisa mwenje yekuvandudza zviitiko zveusiku uye chengetedzo, fenzi, uye mifananidzo ine mavara kujekesa nzvimbo.
Director weOp Operations kuSandals Foundation, Karen Zacca, anoti chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye rave basa rerudo rakabatana nekuzvipira kweSiseko mukusimudzira nharaunda nekubatanidza vechidiki kuburikidza nemitambo.
“Nzvimbo dzinokurudzira mitambo dzinounza vagari pamwe chete kutamba, kuvaka hukama, kusimudzira hunyanzvi hwehupenyu hwese, uye kwakakosha kuhutano hwenzanga. Kunze kweimwe neimwe yemhuri dzepedyo, nharaunda dzinotibatsira kutipa pfungwa yekuva kwedu, uye Sandals Foundation ichagara ichipa kukoshesa kugadzira nzvimbo dzakachengeteka kuti nharaunda dzigare zvakanaka. "
Public Relations Manager kuSandals Ocho Rios Resort, Lyndsay Isaacs, akaronga mashandisirwo ezvinhu anoti timu iyi yakaona kuti inoshandisa hunyanzvi hwevashandi veko nevashandi veko kuti vagadzirise.
“Mapurojekiti anobatsira nharaunda anofanira kushandisawo nharaunda. Zvingakwanisika, Sangano rinobata nyanzvi dzenzvimbo kuti dzive nepfungwa yekuva muridzi mubudiriro pamwe nekubatsira kutsigira raramo yeavo vanoshanda. ”
Iyo mizhinji murals, yakarongedzwa zvine hungwaru mhiri kwenhandare yemitambo, yakadhirowewa neyemuno muimbi Zara uye yakapendwa neSandals Resorts vashanyi nenhengo dzechikwata vakazvipira panguva dzekusvitsa zviitiko pamberi peiyo coronavirus.
“Iyi inyaya yemhuri kwatiri, uye Sandals Foundation ndiyo mota inoshandiswa nevashanyi vedu vekushanya, nhengo dzechikwata, vafambi, nevamwe vatinowana mukana wekushandira nharaunda dzatinoshandira. Ndiri kufara zvikuru nezvakabuda muchirongwa ichi uye handina mubvunzo kuti vanhu veSt. Ann vachachishandisa nemazvo. ”
Ocho Rios anogara mubhasiketi, Dehalo Sappleton, anoti matare akagadziridzwa achabatsira zvikwata zvemuno kuwana maronda pamunda wavo.
“Rudzi urwu rwechipo rwunokosheswa, uye ticharutora senge nderwedu. Vamwe vevatambi vebhasikiti vane tarenda vanobva kuOcho Rios, uye isu tinowanzoenda kuKingston neMontego Bay kunogadzira zita redu. Dare rakagadziridzwa iri rava kutipa mukana wekugadzira zita redu kumusha kwedu. ”
Uye, Kurt Dale, Sports Officer weparish yaSt.Ann neInstitute of Sports, anoti zvivakwa zvakagadziridzwa zvinobatsira vanoburitsa mambure kusimudzira hunyanzvi hwavo nekusimudzira danho rekupinda mumutambo uyu.
“Tinoona kuti vanhu vanosvika makumi mashanu kubva muzana havadi kuwedzera hunyanzvi hwavo munetball, nekuti havana nzvimbo dzekutamba. Vasikana vakati wandei vanofanirwa kufamba nzendo refu kuti vakwanise kutamba, asi nematare akaita seaya ave nyore, zvichave nyore kwavari kuti vabude vatore chikamu. ”